“ အပြာစာပေသည် 'အမျိုးသမီးများကိုမုန်းတီးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမှန်တကယ်လား? "ဟူသောဝေဖန်မှုအမေရိကန်ကိုယ်စားပြုမှုတွင်အသုံးမပြုသောသူများထက်စာရိတ္တမဂ္ဂဇင်းအသုံးပြုသူများသည်လိင်တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုရှိကြသည် (Kohut et al ။ , 2016) - Your Brain On Porn
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အမျိုးသမီးများအားမုန်းတီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်လား” ဟူသောဝေဖန်မှု။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်စားပြုသောအမေရိကန်နမူနာတစ်ခုတွင်အသုံးပြုသူများထက်လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုရှိကြသည်။ (Kohut et al ။ , 2016)
၏စာရေးဆရာများ ဒီလေ့လာမှုက ရှုမြင်သုံးသပ်ကြ သာတူညီမျှ အဖြစ်: (1) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဘို့ပံ့ပိုးမှု, (2) Feminist ဖော်ထုတ်ခြင်း, အာဏာရာထူးကိုင်ပြီး (3) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (4) ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရှိပါတယ်သည့်အခါမိသားစုဘဝကြုံတွေ့နေကြရသည်ကြောင်းယုံကွညျနှင့်ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက် (5) ပိုပြီးကျင်းပခြင်း အစဉ်အလာမိသားစုဆီသို့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားတွေ။ သငျသညျကိုယျတိုငျကိုယုံကြည်သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ဘာသာရေးလူဦးရေဝေးဂိုးသွင်းမယ်လို့တွေ့မြင်ရန်၎င်း၏လွယ်ကူပါတယ် အနိမ့် တေလာ Kohut ရဲ့ 5-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း "သာတူညီမျှ" အကဲဖြတ်ပေါ်မှာ။
ဤတွင်သော့ချက်င်: ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့ရသောလောကလူဦးရေ, များ ဝေးပိုမိုမြင့်မား ဘာသာရေးလူဦးရေထက် porn အသုံးပြုမှုနှုန်း။ ဤအ5စံရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အဆုံးမဲ့သည်အခြား variable တွေကိုလျစ်လျူရှုအသုံးပြုပုံတေလာ Kohut "ဟုသူကပါဝငျသောအရာကိုသူ့ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူ correlating (လောကလူဦးရေအတွက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သော) porn အသုံးပြုမှုကိုအတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိတယ်သာတူညီမျှ"(ဘာသာရေးလူဦးရေအတွက်အနိမ့်) ။ ထိုအခါ Kohut ကအားလုံးကိုပတ်ချာလည်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သို့သော် Kohut သည်အဓိကတွေ့ရှိချက်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည် သူ့ကိုယ်ပိုင်စက္ကူထဲမှာ အရာသည်သူ၏ဂရုတစိုက် contrived ဇာတ်ကြောင်းမှတန်ပြန်ပြေး။ စားပွဲတင်2ခုနှစ်, နောက်ထပ် အထီးနှင့် နောက်ထပ် အမြိုးသမီး porn အသုံးပြုသူများသည် ပေးခဲ့သည်အမျိုးသမီးမဟုတ်"တုန့်ပြန် - - Non-porn-အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောသုံးစွဲသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းမှာ“ အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ” ဖြစ်သည် Kohut ၏စားပွဲသည်ရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုသတိပြုပါ။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူအရေအတွက်သည်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ သူ၏ဖော်ပြချက်သည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုဖြစ်ကြောင်းသင်သိရန်အောက်ခြေမှတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
ထို့အပြင် Kohut ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုအားလုံးနီးပါးနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည် (ကြည့်ပါ ကျော် 40 သဘောထားတွေလိင်အရအခွင့်အရေးမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ, objectification နှင့်လျော့နည်း၏ဤစာရင်း သာတူညီမျှ). စာပေ၏ဤ 2016 ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှတစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.:
အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်အရန့်ကွက်မှုကိုဖော်ပြသည့်ရုပ်ပုံများသည်ပင်မမီဒီယာများတွင်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး၊ ဤအကြောင်းအရာပါ ၀ င်မှုသည်အခြားသူများ၏အမျိုးသမီးများ၏အထင်အမြင်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ရှုမြင်ပုံအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာများဖြစ်သည်။ ဒီပြန်လည်သုံးသပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ synthesize ဖို့ဖြစ်တယ်။ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောဂျာနယ်များတွင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းသုတေသနပြုခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းထုတ်ဝေမှုပေါင်း ၁၀၉ ခုရှိသည်135 လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်သည်ဤအကြောင်းအရာကိုနေ့စဉ်ထိတွေ့တိုက်ရိုက်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနဲ့ဆက်စပ်နေကြတယ်, ဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုများနှင့်ပုံမှန်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်တသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားပေးအပ် ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်ရန်ဘက်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများကိုပိုမိုထောက်ခံအားပေးခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကိုပိုမိုသည်းခံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤ conten မှစမ်းသပ်ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများပါအမျိုးသမီးများ၏အရည်အချင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်လူသားဖြစ်မှုအပေါ်အမြင်လျော့နည်းစေသည်။ "
Taylor Kohut တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemsနာအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမပြေလည်စေရန်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုထုတ်ဝေသည်။ In ဒီ 2017 လေ့လာမှုKohut သည်သူရှာဖွေနေသည့်ရလဒ်များကိုရရှိရန်နမူနာကိုလွဲချော်သွားပုံရသည်။ လေ့လာမှုအများစုမှဖော်ပြသည်မှာညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အနည်းငယ်မျှသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်၊ ဤလေ့လာမှုတွင် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများသည်အပြာများကိုကိုယ်တိုင်သုံးကြသည် (အမျိုးသမီးများ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်အစမှ စတင်၍ ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်)! အဖြစ်မှန် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကြီးဆုံးစစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်း) မှကဏ္ Cross အလိုက်ဒေတာ ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းသာပြီးခဲ့သည့်လက“ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်” သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် ဤလေ့လာမှုကိုဝေဖန်သည့်နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ဒါကြောင့်အဘယျသို့ - လေ့လာမှုအသစ် porn အသုံးပြုသူများသည် '' သာတူညီမျှသဘောထား '' ရှိဟုဆိုသနညျး ယောနရောသမအားဖြင့် (2015).
Kohut ရဲ့ site အသစ် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု သူကပဲတစ်ဦးအစီအစဉ်ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Kohut ရဲ့ဘက်လိုက်မှုကို Motion က M-47 (ကနေဒါ) နှင့်စပ်လျဉ်းကျန်းမာရေးအပေါ်အမြဲတမ်းကော်မတီအဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားမကြာသေးမီကအကျဉ်းထင်ရှားနေသည်။ porn ရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်သုတေသနပြု၏လက်ရှိပြည်နယ်အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်စဉ်အကျဉ်းချုပ်ကို Kohut နှင့်သူ၏ coauthors ခုနှစ်တွင်ချယ်ရီ-ကောက်နေအနည်းငယ်စွန်အဖျားလေ့လာမှုများ၏အပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ထုတ်ဝေအာရုံကြောလေ့လာမှုများသူတို့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်နဲ့ရယ်စရာကောင်းသောဖော်ပြချက်ဟာသူတို့ရဲ့ဘက်လိုက်မှုကြောင့်အဘယ်သူမျှမသံသယထွက်ခွာမည်။
2019 ခုနှစ်တွင် Kohut သည်လက်တဆုပ်စာထောက်ခံသူများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်အတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အတွက်ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု။ Kohut ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ခုခံ RealYBOP twitter အကောင့်“ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ” ဟူသောတွစ်တာ ၁၀၀၀ ကျော်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချပြီးကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသည့်တင်ဒါတွင်။ @BrainOnPorn နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်.
Update ကို (2018): ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကဒီလေ့လာမှုအပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, (နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျKohut et al ။ , 2016): porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
J ကိုလိင် Res ။ 2016;53(1):1-11. doi: 10.1080/00224499.2015.1023427.
အစွန်းရောက်သောအမျိုးသမီးသီအိုရီအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အမျိုးသမီးများအားအမျိုးသားများအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသင့်သောလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများထက်အနည်းငယ်သာရှုမြင်ရန်၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၊ အမျိုးသားများ၊ အထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်းမှပေါင်းစပ်ထားသော variable များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာမဟုတ်သောဘက်မလိုက်ဝါဒကိုထောက်ခံသောစိတ်နေသဘောထားများကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများထက်စွဲမြဲသည်ဟူသောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်များမှာအစွန်းရောက်အမျိုးသမီးသီအိုရီမှဆင်းသက်လာသောယူဆချက်ကိုမထောက်ခံပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများသည်အာဏာရှိသည့်အမျိုးသမီးများ၊ အိမ်အပြင်ဘက်တွင်အလုပ်လုပ်သောအမျိုးသမီးများနှင့်ကိုယ် ၀ န်ဖျက်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပိုမို၍ သာတူညီမျှသောသဘောထားများရှိကြသည်။ ထို့အပြင်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းတို့၏ရိုးရာမိသားစုအပေါ်ထားရှိသောသူတို့၏သဘောထားနှင့်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများအနေဖြင့်သိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်အစွန်းရောက်အမျိုးသမီးသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီသောကျား၊
Generation Porn သည် လိင်ကိစ္စကို မည်ကဲ့သို့ ပယ်ချခဲ့သည်t.co/dFpBj5DS5k